Wardher Relief and Development Organisation | Education
Shir looga hadlayey hormarinta waxbarashada iyo caafimaadka Caabud-waaq, oo lagu qabtay London UK.
daawo biyaha Caabudwaaq degay
Shir looga hadlayey hormarinta waxbarashada iyo caafimaadka Caabud-waaq, oo lagu qabtay London.	17/04/2013 20:20 Community, Education, Health 0 comments Shir weyne si heer sare ah loo soo agaasimay, oo ay agaasinkiisa lahayd hay’ada hormarinta waxbarashada iyo caafimaadka ee waqooyiga gobolka Galguduud, oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan WARDO, ayaa maalin nimadii Axada ahayd oo taariikhdu ahayd 14/04/13, lagu qabtay mid kamida golayaasha shirarka ee ku yaala bartamaha magaalada London ee xarunta u [...]
Xaafiiska maamulaha iskuulka Caabud-waaq.	09/04/2013 14:36 Education 0 comments Xaafiiska maamulaha iskuulka Caabud-waaq.
Muuqaal ku tusaya baahida agab waxbarasho ee Caabud-waaq.	09/04/2013 14:34 Education 0 comments Muuqaal ku tusaya baahida agab waxbarasho ee degmada Caabud-waaq.
Daryeel xumo ka muuqata dugsiyada waxbarasho ee Caabudwaaq.	09/04/2013 14:17 Education 0 comments Daryeel xumo ka muuqata dugsiyada waxbarasho ee Caabud-waaq.
Dib udhac weyn oo ka muuqda xarumaha waxbarasho ee Caabudwaaq.	09/04/2013 14:14 Education 0 comments Dib udhac weyn oo ka muuqda Xarumaha Waxbarasho ee Caabuud-waaq.
Xarumaha wax lagu barto Caabud-waaq, oon lahayn agab buuxa.	09/04/2013 14:12 Education 0 comments Xarumaha wax lagu barto Caabud-waaq, oon lahayn agab buuxa.
Muuqaalka sawirkaan waxaa kuu soo gudbinaya hay’ada Wardo.	09/04/2013 14:11 Education 0 comments Muuqaalka sawirkaan waxaa kuu soo gudbinaya hay’ada Wardo.
Muuqaalka hoos yaal waa mid kamida dugsiyada Caabud-waaq.	09/04/2013 14:09 Education 0 comments Muuqaalka hoos yaal waa mid kamida dugsiyada Caabud-waaq.
Halkaani waa mid kamida goobaha waxbarasho ee dhalaanka degmada Caabud-waaq.	09/04/2013 14:06 Education 0 comments Waxaa halkaan wax ku barta qaar kamida ardayda Caabud-waaq.
Sawir fariin kooban kaa siin kara baahida waxbarashada Caabud-waaq.	09/04/2013 13:52 Education 0 comments Sawir fariin kooban kaa siin kara baahida waxbarashada Caabud-waaq.
Flood in Somalia: An Urgent Appeal Fariin muhiim ah oo ku socota Qurbo-joogta waqooyiga Galguduud Shir looga hadlayey hormarinta waxbarashada iyo caafimaadka Caabud-waaq, oo lagu qabtay London. Sawirka muuqaalka isbitaalka dhimirka Caabud-waaq. Dhagax dhigii isbitaalka dhimarka Caabud-waaq. Ahmed Abdikarim Saciid:
Asc. salaan farabadan kadib aad ayaan ugu farax sanahay bandhiggaaan qurxoon eed ku qeexde...
Sawirka hoose wuxuu tilmaamayaa dugsiga waxbarashda deegaanka Cilaanle, ee DDS Ethiopia. Daawo sawirada 1 comments
relief and development	Wardo Ka daalaco hormarka Waqooyiga Galgaduud	Barnaamijka Talaalka Caruurta ee Degmada Caabud-waaq.	munaasabad lagu tagerayo waxbarashada Caabud-waaq, Caasha Jabriil Xassan Xaad.	Daawo mashaariicda horumarineed oo isugu jirta caafimaad, waxbarasho iyo ganacsi oo laga hirgaliyay degmada Caabud-waaq.	Isbitaalka Xadiyo ee degmada Caabud-waaq.	Wardher Relief and Development Organisation
© Copyright 2013 — Wardher Relief and Development Organisation. All Rights Reserved